အဖေ့မျက်ရည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အဖေ့မျက်ရည်
Posted by badbabylay09@gmail.com on Oct 15, 2010 in News | 8 comments
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ PR (Permanent
ရောကူဖော်လောင်ဖက်လိုအပ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကမိခင်ကြီးတွေကို စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုအလည်လာဖို့လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပို့ပေးကြပါတယ်။ ဖခင်အိုကြီးတွေကိုဘာလို့မခေါ်တာလဲလို့မေးကြည့်တော့အဖေကကလေးလည်းမထိန်းတက်ဘူး၊
ဆရာမလေး သမီးဖြစ်သူက အဖေသမီးကို လူကြားထဲမှာ သမီးလို့ခေါ်ပါနဲ့တဲ့။
သြော်ဒါတွေကို အဖေများသိရင် ဘယ်လောက်များ မျက်ရည်ကျလိုက်မလဲ။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့သားသမီးတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေထဲမှာ အဖေကိုသေပြီလို့သဘောမှတ်ပြီး အဖေ့နာမည်ကိုကွင်းကလေးထဲခတ်ပြီးဖိတ်စာမှာပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။
စိတ်အနာကြီးနာခဲ့တာကြောင့်မိဘအုပ်ထိန်းသူနေရာမှာအဖေရဲ့နာမည်ကိုလုံးဝဖျောက် အမေနာမည်တစ်လုံးတည်း ကို ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ဖူးလိုက်ရဲ့။ ဒါဆိုဒီကလေးအဖေမပါဘဲမွေးခဲ့တာပေါ့။
အဲဒါကြောင့်ရော်ဘာဖိနပ်ပါးပါးလေးတွေကိုမြင်ရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဖေကိုသာ သတိရလိုက် ကြပါလို့……………..။
ကောင်းတယ်ဗျာ ဖခင်အကြောင်းရေးတာအင်မတန်နည်းတယ် သားသမီးတွေကဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိတာများတယ်…စိတ်မကောင်းစရာပါ…
ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး ရပ်ဝေးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဖေဖေကို ပိုသတိရမိတယ်…..
badbabylay@ ရေးထားတာအရမ်းကောင်းပါတယ် ။ မိဘဆိုတာနှစ်ပါးရှိတာပဲ .အဖေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်တူထပ်မျှရိုသေလေးစားမှုရမှာပေါ့ ။ တစ်နေ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာ လည်းမလွှဲမသွေ အဖေတွေဖြစ်လာကြမှာလေ…အဲဒီအချိန်မှာလဲ….???
badbabylay@ ရေးထားတာအရမ်းကောင်းပါတယ် ။ မိဘဆိုတာနှစ်ပါးရှိတာပဲ ။ အဖေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သားသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှရိုသေလေးစားမှုရှိရမှာပေါ့ ။ တစ်နေ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာ လည်းမလွှဲမသွေ အဖေတွေဖြစ်လာကြမှာလေ…အဲဒီအချိန်မှာလဲ….???
alien on the planet earth says:
အားလုံးကိုထောက်ခံပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်လို့ အပျော်ရှာတာကတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါက ဗီလိန်သဘောထက်ပိုပြီး သစ္စာဖောက်သဘောမျိုးကို ပိုသက်ရောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်တဲ့အဖေရှိရင် မိသားစုက ဘယ်တော့ ငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ အဖေ ရှိသလို၊ တော်တော် ဆိုးတဲ့ အဖေ တွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။
Patriotic Burma says:
In my environment,some dads are evil but many are noble.I’ve seen one good daddy,his wife leave him with two children and she ran away with other man.That good daddy is just onlyavendor but he ‘s now taking care of those two kids.
But some bad daddies are also around us.
However dads are always happy to fulfill their children wishes:-)